Iiresiphi zokulungiselela ukutya kweentlanzi ezenziwe ekhaya | Ngeentlanzi
Ukutya okuzenzelayo kwentlanzi
IsiJamani sasePortillo | | I-Aquarium yetropiki
Ufuna ukwenza ukutya kwasekhaya okuloba? Kwinqaku elidlulileyo sikunike Iresiphi yokulungiselela ukutya uncamathisele intlanzi yetropiki okanye ezona ntlobo zixhaphakileyo. Namhlanje siza kukunika iresiphi yokulungiselela ukutya kwentlanzi yeflake.
I-JBL 40310 -Ukutya ...
INkulumbuso eTropical Supervit ...
1 Ukutya okwenziwe ekhaya kwintlanzi yetropiki
1.1 Izithako zokwenza ukutya kwentlanzi ekhaya
1.2 Ungakulungisa njani ukutya kweentlanzi zasekhaya
2 Amanzi abandayo enzelwe ukutya kwentlanzi
2.1 I-Tetra Goldfish yeNtlanzi yaManzi aBandayo
2.2 Igranules yokutya kwentlanzi ebandayo
2.3 Umdla wokutya
3 Ukutya kwendalo kweeguppies
4 Senza njani isidudu sentlanzi yaselwandle?
Ukutya okwenziwe ekhaya kwintlanzi yetropiki
Into yokuqala esiza kuyenza kukufunda ukulungiselela ukutya kwasekhaya kwintlanzi yetropiki:
Izithako zokwenza ukutya kwentlanzi ekhaya
Ezi zizithako eziyimfuneko ukuze ukwazi ukuzilungiselela ukutya kweentlanzi okuzenzela.
Isiqingatha sekhilogram yenyama yentlanzi ngaphandle kwezikali
Isiqingatha sekhilogremu yesibindi senyama yenkomo
Isiqingatha sekhilogram yentliziyo ye-veal (ngaphandle kwamafutha okanye iimbilini)
Intloko yegalikhi exutywe
Ijusi yelamuni enye,
Iipuni ezine ze-oats eziflileyo
Iipuni ezimbini zamalungiselelo e-polyvitamin
Ipunipoon yesoyi ye-lecithin
¼ icephe yesodium benzoate
Enye icephe yeglycerin (yesithambisi)
Ungakulungisa njani ukutya kweentlanzi zasekhaya
Sigaya izithako de sifumane isidudu songeza amanzi de sifikelele kulungelelwaniso olungelolwelo lulwelo.
Silungisa itreyi ethe tyaba-ezantsi kwaye sisasaza isidudu kunye nomaleko wesidudu.
Sibeka eziko kwiqondo lobushushu elincinci, khumbula ukuba uninzi lweevithamini lunokutshatyalaliswa kubushushu obuphezulu. Sipheka de ipasta yome.
Sisusa ukutya kusinceda nge spatula. Ukuba ukufumanisa kunzima, jika kwiqhinga lokushiya ngaphandle ubusuku bonke ukuze ukufuma okusingqongileyo kuthambe.
Gcina iiflakes kwisitya esivaliweyo.
Izixa zezithako zinokwahluka ngokuxhomekeke kwiimfuno zesondlo zentlanzi. Ukuba sinentlanzi ezinemikhwa etya kakhulu singalinciphisa inani lemifuno, ukuba ngaba zitya kakhulu siza kwandisa inani lemifuno.
Ukuba kufuneka khuthaza umdla wakho wokutya Singongeza icephe lesinye sevithamini esimbaxa esinokufumaneka kwikhemesti okanye kugqirha wezilwanyana. Inkqubo kufuneka icetyiswe yingcali ebaleni.
Amanzi abandayo enzelwe ukutya kwentlanzi
Zonke iintlanzi zamanzi abandayo kulula ukuzigcina. Bayintlanzi abanomdla omkhulu, kodwa oko akuthethi ukuba ungabondla nantoni na. Bafuna ukutya ilungele inkqubo yakho yokwetyisa kwaye, ngenxa yoku, unokukhetha kwimixube eyahlukeneyo (iiflakes, igranules, iintonga ezidadayo ...).
I-Tetra Goldfish yeNtlanzi yaManzi aBandayo
Oku kukutya okupheleleyo kwintlanzi yegolide kunye nezinye iintlanzi ezinamanzi abandayo.
Iintlanzi, njengawo nawuphi na umntu ophilayo, zifuna ukutya okunezakha-mzimba nomgangatho ophezulu weevithamini. Le fomula yobunini beTetra ine yomxube olinganayo weevithamini ezifanelekileyo, izithako ezinegalelo elikhulu lamandla kunye nee-immunostimulants eziphucula ukusebenza komzimba kunye nokomeleza ukumelana nezifo zentlanzi yethu.
Ukongeza, lo mxube ulungisiwe ukuze babe nokutya okwahlukeneyo kunye nokulinganisela, kubandakanya konke izakha mzimba ezibalulekileyo, kunye nezinto zokulandela umkhondo.
Ngale ndlela yokutya uqinisekisa ubomi obude nobusempilweni kwiintlanzi zakho, ukongeza ekuphuculeni imibala yazo eqaqambileyo.
Igranules yokutya kwentlanzi ebandayo
Ndiyabulela oku kutya kukutya, imibala kunye nokhuselo lwendalo iintlanzi zethu zamanzi abandayo zomelezwa kakhulu.
Yenziwe ngumgubo weentlanzi, ingqolowa, umgubo wengqolowa, i-spirulina (i-10%), intsholongwane yengqolowa, igwele le-brewer, i-oyile yeentlanzi, i-gammarus, i-gluten yengqolowa, i-krillmeal, i-mussel-lipped green (perna canaliculus) powder, nettle, herbs, alfalfa, ulwandle , ipaprika, iparsley, isipinatshi, iminqathe, igalikhi.
Ukuba nayiphi na intlanzi yethu iqala ukutya kancinci okanye iqala ukungabinambityo, kukho izinto ezikhuthazayo zokungcamla ukutya kunye nokutya. Isetyenziselwa iintlanzi ezibandayo kunye neetyuwa zamanzi abandayo.
Esi sikhuthazi siqulethe into esebenzayo yendalo efumaneka kwigalikhi, i-allicin, ebonakalisiweyo ukuba ineziphumo ezininzi eziluncedo kwezempilo. UAllicin womelele iipropati ze-antioxidant (efanayo nevithamini C) enceda ukugcina impilo ngokususa iiradicals eziyingozi simahla.
Iluncedo kakhulu ukuba ufuna ukunika iyeza ngomlomo kwintlanzi exutywe nokutya.
Ukutya kwendalo kweeguppies
Phakathi kokutya okuthandwayo kwendalo kweeguppies zizikali. Zininzi iintlobo zesikali, ukusuka kwezo zinobungakanani besityalo ukuya kwezo zinomxholo ophezulu weprotein, kunye nezo zitshona ngokukhawuleza ziye kwezo zidadayo ngaphezulu ukuze zilungele imikhwa yeentlobo ezahlukeneyo zeentlanzi.
Ukuba sondla iintlanzi zethu ngezikali ezigqithileyo, ziqala ukugcina ezantsi kwaye zinokubangela amanzi alahlekelwa ngumgangatho ukubola.
Singazondla ii-guppies zethu ngokutya esinokukufumana ekhitshini lethu. Oku kutya kubandakanya iimbotyi, itshizi kunye nezinye iimveliso zobisi, amaqanda abilisiweyo, inyama ecekeceke, iziqhamo, ukutya okuziinkozo, njl. Ngokucacileyo, Kuyimfuneko ukulungisa konke oku kutya ukuze zigqitywe zii guppies zethu. Zingacocwa kwaye zixutywe ne-gelatin ukwenza iityhubhu, okanye ityunyuzwe ize ityiswe ngqo kwiintlanzi. Banokudlula kwi-blender de kufumaneke uhlobo lokumiswa.
Inyani yile yokuba zininzi iindlela zokondla iintlanzi ngeemveliso ezintsha, kodwa kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba bayawenza manzi amanzi kakhulu kwaye kuya kufuneka susa ngokukhawuleza iintsalela ezihleli ngasemva.
Okokugqibela, sinokondla ii-guppies zethu ngokutya okuphilayo okunjengezinambuzane, i-roe yentlanzi, i-brine shrimp, njl. Olunye loku kutya lunokunikwa iintlanzi njengoko zinjalo, kodwa ezinye kufuneka zinqunyulwe okanye zityunyuzwe.
Ukondla ukutya okuphilayo kwimipuphu, kufuneka silumke kuyo musa ukwazisa nezifo, njengemibungu yezinambuzane, ezinokuthi zihlasele iintlanzi zethu.
Senza njani isidudu sentlanzi yaselwandle?
Ukuba sifuna ukwenza eyethu isidudu ukondla iintlanzi zolwandle kwi-aquarium yethu, kufuneka silandele amanyathelo athile. Into yokuqala kukuchaza into esiyithatha njenge-mush. Isidudu yimveliso elungisiweyo eveliswayo yokunyibilikisa ukungafani kwemollusk, njenge-octopus, intlanzi ebomvu, i-shrimp, njl. ezityunyuziweyo zide zifumane isidudu.
Kuxhomekeke kukutya iintlanzi zethu ezinako, kufuneka siquke izithako ngokutya okutyayo, ukutya okunezityalo ezitya utywala okanye ukutya okomileyo.
Izithako zeporridge yeentlanzi:
Ingca yolwandle uNori
Nje ukuba sibe nazo zonke izithako zokulungiselela isidudu, sizigalele kwi-blender kancinci kancinci, de zonke zidityaniswe. Siyidibanise ide ithathe ukubhalwa kwesidudu kwaye banokuba njalo jonga ezinye iziqwenga zezithako.
Ukuba sifuna ukugcina isidudu sethu okwethutyana, singasigcina kwisingxobo seplastiki esingafihlisiyo size siyitywinele endaweni yayo, sizibeke kwisikhenkcezisi.
Ngoku ungondla iintlanzi zakho ngokuchanekileyo ngokweemfuno zazo zesondlo, ngelixa uzinika ukutya okusempilweni kunye nokulinganisela okuguqula impilo kunye nokuba sempilweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » I-Aquarium yetropiki » Ukutya okuzenzelayo kwentlanzi
UDarwin Vera Zambrano sitsho
Molo, ndimtsha kwesi sihloko, inyani iluncedo kakhulu kum, enkosi ngento endiyifundisileyo kwaye ndifuna uqhubeke nokubhala ngakumbi ngesi sihloko sibaluleke kangaka.
Phendula kuDarwin Vera Zambrano